Baarlamaanka Somalia ayaa ansixiyay xukuumadda cusub - BBC News Somali
Baarlamaanka Somalia ayaa ansixiyay xukuumadda cusub
27 Nofembar 2010
Image caption Codbixinta maanta waxay ahayd gacantaag taas oo lagu oggolaaday codbixin dhacday bilawgii kulanka.
Waxaa shirka fadhiyay qaar badan oo ka mid ah wasiirrada codka kalsoonida loo qaadayay inkastoo ra'iisal wasaaruhu aanu goobjoog ahayn.
Guddoomiyaha baarlamaanka oo shirka furay waxaa uu sheegay inay soo xaadireen 343 xildhibaan oo ka mid ah 550 xubnood ee baarlamaanku ka kooban yahay.
Guddoomiyuhu waxaa uu sheegay inay jiraan labo fikradood oo mudanayaashu kala aaminsan yihiin in codka loo qaado sidaas darteed marka hore loo baahan in loo codeeyo qaabka codka kalsoonida loo qaadayo. Waxaana aqlabiyad heshay in codka loo qaado gacan-taag.
Weriyaha BBC, Maxamed Maxamuud Dhoorre, oo goobta shirka joogay ayaa Cabdinuur Sheekh uga warramay sidii codbixintu u dhacday.
Markii codka kalsoonida dowladda loo qaaday waxaa oggolaaday 251 xubnood oo baarlamaanka ka tirsan. Waxaa diiday 93 xubnood, labo xubnoodna way ka aamuseen.
Hase ahaatee xubnaha diiday ayaa sheegaya inaysan dowalddu aqlabiyad helin oo loo baahnaa ugu yaraan 276 mudane inay u codeeyaan. Cabdirashiid Cirro oo ka mid ah xubnaha ka soo horjeestay ansixinta dowladda waxaa uu BBCda u sheegay inay aaminsan yihiin in xukuumaddu ay ku dhacday codkii kalsoonida ee loo qaaday. waxaana uu ku eedeeyay guddoomiyaha baarlamaanka, Shariif Xasan Sheekh Aadan, inuu isagu marsaday xukuumadda cusub ee aqlabiyad baarlamaan aanay helin.
Guddoomiyaha baarlamaanka oo markaasi kaddib hadlay waxaa uu sheegay in xukuumadda cusub ay gudubtay, sidaas ayaana dowladda loogu hambalyeeyay.
Kulanka baarlamaanka ayaa qabsoomay maanta iyadoo isla markaa ay dagaallo ka dhacayeen degmada Wardhiigley oo aan ka fogeyn halka shirka baarlamaanku ka dhacay iyo goobo kale oo ka tirsan magaalada Muqdisho. Dagaallada oo bilawday kaddib markii xarakada Al Shabaab ay soo weerareen degaanno ay ku sugnaayeen xoogagga dowladda iyo ciidanka AMISOM ee Midowga Afrika lama garanayo khasaaraha dhabta ah